ဝခှေဲမရမှုမြားစှာနှငျ့ မယုံကွညျနိုငျစရာ တိုကျဆိုငျမှု (၈) ခကျြ - ONE DAILY MEDIA
ဝခှေဲမရမှုမြားစှာနှငျ့ မယုံကွညျနိုငျစရာ တိုကျဆိုငျမှု (၈) ခကျြ
တဈခါတဈရံမှာ ဘဝဟာ ဖွဈနိုငျခြေ သီအိုရီတှနေဲ့ ရှငျးပွလို့မရတဲ့ အံ့ဩထူးဆနျးဖှယျရာ တှေ ယူဆောငျလာတတျပါတယျ။
ကမ်ဘာပျေါမှာ တှရေ့လရှေိ့သော ကွိုတငျမခနျ့မှနျးနိုငျတဲ့ လြိုဝှကျဆနျးကွယျ အဖွဈအပကျြမြားကို ကြှနျတျောတို့ အဖှဲ့သားမြားက စဉျဆကျမပွတျ ရှာဖှစေုဆောငျးပွီး တငျဆကျပေးလကျြရှိပါတယျ။
(၁) လူဝငျစားလသေလား ?
Ferrari Company စတငျတညျထောငျသူ Enzo Ferrari ဟာ (၁၉၈၈) ခုနှဈမှာ ကှယျလှနျခဲ့ပွီးနောကျ လအနညျးငယျအကွာမှာ ဂြာမနီနာမညျကွီး ဘောလုံးသမား Mesut Özil ကိုမှေးဖှားခဲ့ပါတယျ။သူတို့နှဈဦးဟာ အမွှာညီအဈကိုမြားအလား ထငျရအောငျ ရုပျရညျခငျြးဆငျတူနကွေပွီး လူဝငျစားမှုမြားလေးလား ဟုလညျး မေးခှနျးထုတျမှုမြား‌ရှိနပေါတယျ။
(၂) အခြိနျခရီးသှားခွငျး သကျသတေဈခု
Jennifer Lawrence ဟာ အီဂဈြမငျးသမီးဟောငျး Zubaida Tharwat ၏ ပုံတူအလား ဆငျတူနပေါတယျ။
(၃)မတူညီသော ရာစုနှဈမြားမှ အိမျနီးခငျြးမြား
ဂီတလောကမှာ ကိုယျစီကိုယျစီ ခတျေအလိုကျ အလှမျးမိုးနိုငျဆုံး အနုပညာရှငျမြားဖွဈခဲ့ကွတဲ့ နာမညျကွီးတေးရေးဆရာ George Handel ဟာ နာမညျကွီးဂဈတာပညာရှငျ Jimi Hendrix နှငျ့ အိမျနီးနားခငျြးမြားဖွဈကွပါတယျ။ Handel ဟာ လနျဒနျမွို့ရှိ အိမျအမှတျ(၂၅) Brook လမျးမှာနထေိုငျပွီး Hendrix က အိမျအမှတျ(၂၃) Brook လမျးမှာနထေိုငျခဲ့ပါတယျ ။ သို့သျော သူတို့နှဈဦးဟာ ရာစုနှဈနှဈခုခနျ့ အသကျကှာခွားခဲ့ကွပါတယျ ။
(၄) Hoover ဆညျမှ အဖွဈဆိုး
(၁၉၂၂) ၊ ဒီဇငျဘာ (၂၀) ရကျနမှေ့ာ George Tierney ဆိုသူ အမြိုးသားဟာ Hoover ဆညျ ဆောကျလုပျရေးလုပျငနျးခှငျမှာ ပထမဆုံးသော မတျောတဆမှုဖွငျ့ သဆေုံးခဲ့ရသူ ဖွဈပါတယျ။
တိုကျဆိုငျစှာပငျ ထိုဆောကျလုပျရေးမှ နောကျဆုံး အနဖွေငျ့ အသကျဆုံးရှူံးခဲ့ရသညျ့ အလုပျသမားမှာ သူ၏သားဖွဈသူ Patrick George ဖွဈပွီး ဒီဇငျဘာ (၂၀) ရကျနမှေ့ာပဲ သဆေုံးခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။
(၁၈၉၅) ခုနှဈ Ohio ပွညျနယျတှငျဖွဈပှားခဲ့သော ယာဉျတိုကျမှုဟာတော့ ငိုအားထကျ ရယျအားသနျ ခဲ့ရပါတယျ။ ထိုစဉျက Ohio ပွညျနယျဟာ မျောတျောကား နှဈစီးသာ စတငျ ထုတျလုပျရသေး ယငျးကားနှဈစီးကပဲ ယာဉျတိုကျမှုဖွဈပှားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ကံမကောငျးစှာပငျ ထိုစဉျအခါက မတျောတဆမှုမှတျတမျး မှတျရာမြား မရှိသေးတဲ့အတှကျကွောငျ့ ထိုအဖွဈအပကျြကို တရားဝငျမှတျတမျး တငျထားနိုငျခွငျးတော့ မရှိခဲ့ပါဘူး။
(၆) Edgar Allan Poeရဲ့ အခြိနျခရီးသှားစကျ
Edgar Allan Poe ရဲ့ The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucke စာအုပျမှာတော့ နဈမွုပျသင်ျဘောပျေါမှ ကနျြရဈသူ သင်ျဘောလုပျသား(၄) ဦးတို့ဟာ Richard Parker ဆိုသူ သင်ျဘောသားကို သတျဖွတျ စားသောကျခဲ့ကွကွောငျး ရေးသားထားခဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါစာအုပျထုတျဝပွေီး (၄၆) နှဈအကွာမှာတော့ အမှနျတကယျ လှမွေုပျမှုတဈခုဖွဈခဲ့ပွီး အသကျရှငျလကျြ ကယျဆယျနိုငျခဲ့သူ သင်ျဘောလုပျသားမြားက သူတို့ဟာဝမျးရေးအတှကျ Richard Parker ဆိုသူကို သတျဖွတျစားသောငျခဲ့မိကွောငျး ပွနျပွောပွခဲ့ကွပါတယျ။ထို့ကွောငျ့ Poe ဟာ အခြိနျခရီးသှားစာရေးဆရာတဈယောကျ ဖွဈနိုငျကွောငျး ဝဖေနျသံတှေ ကယျြလောငျလာခဲ့ပါတယျ။
Bermuda Islands ၌ နထေိုငျသူ အသကျ (၁၇) နှဈ အရှယျ Erskine Lawrence Ebbin ဆိုသူဟာ (၁၉၇၅) ဇူလိုငျလမှာ လမျးပျေါ ဆိုငျကယျစီးနစေဉျ Taxi တဈစီးနှငျ့ ယာဉျတိုကျမှုဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ထိုဖွဈရပျမတိုငျမှီ တဈနှဈအလို (၁၉၇၄) ဇူလိုငျမှာ အသကျ(၁၇)နှဈအရှယျ သူ၏အကိုဖွဈသူဟာလညျး ယာဉျမတျောတဆမှုဖွငျ့ သဆေုံးခဲ့ရပါတယျ။ အံ့ဩဖှယျကောငျးသညျကတော့ တဈနှဈသာခွားပွီး ညီအဈကိုနှဈဦးလုံးကို သဆေုံးစခေဲ့သော အဆိုပါယာဉျတိုကျမှုဟာ ရကျစှဲ ၊ စီးနငျးသောဆိုငျကယျ ၊ တိုကျခံရသောလမျး ၊ Taxi ယာဉျ ၊ ယာဉျမောငျးနှငျ့ စီးနငျးလာသော ခရီးသညျ အားလုံးတူညီ တဈထပျတညျးကနြခွေငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။
(၈) Anthony Hopkins နှငျ့ ရှားပါးစာအုပျ
မငျးသားကွီး Anthony Hopkins ဟာ George Feifer ရေးသားပွီး သူပါဝငျသရုပျဆောငျမညျ့ The Girl from Petrovka ဆိုသော ဇာတျကားမှ ဇာတျဝငျခနျးအတှကျ အဆိုပါစာအုပျကို အလောတကွီး ဖတျရှူလိုခဲ့ပါတယျ။ မညျသညျ့ဆိုငျမှာမှ ရှာဖှဝေယျယူမရခဲ့သျောလညျး တိုကျဆိုငျစှာပငျ ထိုစာအုပျ မိတ်တူကို မွအေောကျရထားပျေါမှ ကောကျရခဲ့ပါတယျ။
နောကျပိုငျး Feifer နဲ့ပွနျလညျတှဆေုံ့ဖွဈခြိနျ ထိုအကွောငျး ပွောပွရာမှာ Feifer က သူ့တှငျ အပိုမိတ်တူမရှိ‌တော့ကွောငျးနဲ့ ရှိသညျ့တဈခုမှာ လညျး မိတျဆှတေဈဦးက မအေောကျရထားပျေါမှာ ကနျြရဈပွီးပြောကျဆုံးခဲ့ရကွောငျး ပွောပွခဲ့ပါတယျ ။
ဝေခွဲမရမှုများစွာနှင့် မယုံကြည်နိုင်စရာ တိုက်ဆိုင်မှု (၈) ချက်
တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဘဝဟာ ဖြစ်နိုင်ချေ သီအိုရီတွေနဲ့ ရှင်းပြလို့မရတဲ့ အံ့ဩထူးဆန်းဖွယ်ရာ တွေ ယူဆောင်လာတတ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ တွေ့ရလေ့ရှိသော ကြိုတင်မခန့်မှန်းနိုင်တဲ့ လျိုဝှက်ဆန်းကြယ် အဖြစ်အပျက်များကို ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့သားများက စဉ်ဆက်မပြတ် ရှာဖွေစုဆောင်းပြီး တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။
(၁) လူဝင်စားလေသလား ?
Ferrari Company စတင်တည်ထောင်သူ Enzo Ferrari ဟာ (၁၉၈၈) ခုနှစ်မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးနောက် လအနည်းငယ်အကြာမှာ ဂျာမနီနာမည်ကြီး ဘောလုံးသမား Mesut Özil ကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာ အမြွှာညီအစ်ကိုများအလား ထင်ရအောင် ရုပ်ရည်ချင်းဆင်တူနေကြပြီး လူဝင်စားမှုများလေးလား ဟုလည်း မေးခွန်းထုတ်မှုများ‌ရှိနေပါတယ်။
(၂) အချိန်ခရီးသွားခြင်း သက်သေတစ်ခု
Jennifer Lawrence ဟာ အီဂျစ်မင်းသမီးဟောင်း Zubaida Tharwat ၏ ပုံတူအလား ဆင်တူနေပါတယ်။
(၃)မတူညီသော ရာစုနှစ်များမှ အိမ်နီးချင်းများ
ဂီတလောကမှာ ကိုယ်စီကိုယ်စီ ခေတ်အလိုက် အလွှမ်းမိုးနိုင်ဆုံး အနုပညာရှင်များဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ နာမည်ကြီးတေးရေးဆရာ George Handel ဟာ နာမည်ကြီးဂစ်တာပညာရှင် Jimi Hendrix နှင့် အိမ်နီးနားချင်းများဖြစ်ကြပါတယ်။ Handel ဟာ လန်ဒန်မြို့ရှိ အိမ်အမှတ်(၂၅) Brook လမ်းမှာနေထိုင်ပြီး Hendrix က အိမ်အမှတ်(၂၃) Brook လမ်းမှာနေထိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ သို့သော် သူတို့နှစ်ဦးဟာ ရာစုနှစ်နှစ်ခုခန့် အသက်ကွာခြားခဲ့ကြပါတယ် ။
(၄) Hoover ဆည်မှ အဖြစ်ဆိုး
(၁၉၂၂) ၊ ဒီဇင်ဘာ (၂၀) ရက်နေ့မှာ George Tierney ဆိုသူ အမျိုးသားဟာ Hoover ဆည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်မှာ ပထမဆုံးသော မတော်တဆမှုဖြင့် သေဆုံးခဲ့ရသူ ဖြစ်ပါတယ်။
တိုက်ဆိုင်စွာပင် ထိုဆောက်လုပ်ရေးမှ နောက်ဆုံး အနေဖြင့် အသက်ဆုံးရှူံးခဲ့ရသည့် အလုပ်သမားမှာ သူ၏သားဖြစ်သူ Patrick George ဖြစ်ပြီး ဒီဇင်ဘာ (၂၀) ရက်နေ့မှာပဲ သေဆုံးခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁၈၉၅) ခုနှစ် Ohio ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ယာဉ်တိုက်မှုဟာတော့ ငိုအားထက် ရယ်အားသန် ခဲ့ရပါတယ်။ ထိုစဉ်က Ohio ပြည်နယ်ဟာ မော်တော်ကား နှစ်စီးသာ စတင် ထုတ်လုပ်ရသေး ယင်းကားနှစ်စီးကပဲ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပင် ထိုစဉ်အခါက မတော်တဆမှုမှတ်တမ်း မှတ်ရာများ မရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့် ထိုအဖြစ်အပျက်ကို တရားဝင်မှတ်တမ်း တင်ထားနိုင်ခြင်းတော့ မရှိခဲ့ပါဘူး။
(၆) Edgar Allan Poeရဲ့ အချိန်ခရီးသွားစက်
Edgar Allan Poe ရဲ့ The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucke စာအုပ်မှာတော့ နစ်မြုပ်သင်္ဘောပေါ်မှ ကျန်ရစ်သူ သင်္ဘောလုပ်သား(၄) ဦးတို့ဟာ Richard Parker ဆိုသူ သင်္ဘောသားကို သတ်ဖြတ် စားသောက်ခဲ့ကြကြောင်း ရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါစာအုပ်ထုတ်ဝေပြီး (၄၆) နှစ်အကြာမှာတော့ အမှန်တကယ် လှေမြုပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး အသက်ရှင်လျက် ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့သူ သင်္ဘောလုပ်သားများက သူတို့ဟာဝမ်းရေးအတွက် Richard Parker ဆိုသူကို သတ်ဖြတ်စားသောင်ခဲ့မိကြောင်း ပြန်ပြောပြခဲ့ကြပါတယ်။ထို့ကြောင့် Poe ဟာ အချိန်ခရီးသွားစာရေးဆရာတစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဝေဖန်သံတွေ ကျယ်လောင်လာခဲ့ပါတယ်။
Bermuda Islands ၌ နေထိုင်သူ အသက် (၁၇) နှစ် အရွယ် Erskine Lawrence Ebbin ဆိုသူဟာ (၁၉၇၅) ဇူလိုင်လမှာ လမ်းပေါ် ဆိုင်ကယ်စီးနေစဉ် Taxi တစ်စီးနှင့် ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုဖြစ်ရပ်မတိုင်မှီ တစ်နှစ်အလို (၁၉၇၄) ဇူလိုင်မှာ အသက်(၁၇)နှစ်အရွယ် သူ၏အကိုဖြစ်သူဟာလည်း ယာဉ်မတော်တဆမှုဖြင့် သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ အံ့ဩဖွယ်ကောင်းသည်ကတော့ တစ်နှစ်သာခြားပြီး ညီအစ်ကိုနှစ်ဦးလုံးကို သေဆုံးစေခဲ့သော အဆိုပါယာဉ်တိုက်မှုဟာ ရက်စွဲ ၊ စီးနင်းသောဆိုင်ကယ် ၊ တိုက်ခံရသောလမ်း ၊ Taxi ယာဉ် ၊ ယာဉ်မောင်းနှင့် စီးနင်းလာသော ခရီးသည် အားလုံးတူညီ တစ်ထပ်တည်းကျနေခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(၈) Anthony Hopkins နှင့် ရှားပါးစာအုပ်
မင်းသားကြီး Anthony Hopkins ဟာ George Feifer ရေးသားပြီး သူပါဝင်သရုပ်ဆောင်မည့် The Girl from Petrovka ဆိုသော ဇာတ်ကားမှ ဇာတ်ဝင်ခန်းအတွက် အဆိုပါစာအုပ်ကို အလောတကြီး ဖတ်ရှူလိုခဲ့ပါတယ်။ မည်သည့်ဆိုင်မှာမှ ရှာဖွေဝယ်ယူမရခဲ့သော်လည်း တိုက်ဆိုင်စွာပင် ထိုစာအုပ် မိတ္တူကို မြေအောက်ရထားပေါ်မှ ကောက်ရခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်း Feifer နဲ့ပြန်လည်တွေ့ဆုံဖြစ်ချိန် ထိုအကြောင်း ပြောပြရာမှာ Feifer က သူ့တွင် အပိုမိတ္တူမရှိ‌တော့ကြောင်းနဲ့ ရှိသည့်တစ်ခုမှာ လည်း မိတ်ဆွေတစ်ဦးက မေအောက်ရထားပေါ်မှာ ကျန်ရစ်ပြီးပျောက်ဆုံးခဲ့ရကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ် ။
အောငျမွငျသောခငျပှနျးနောကျကှယျက ဇနီး (သို့) အောငျမွငျသောဇနီးသညျနောကျကှယျက ခငျပှနျး